Ahoana ny fomba hampahafantarana an'i Siri anarana sarotra tononina anarana | Vaovao IPhone
Azo antoka fa maro aminareo no mampiasa Siri hiantsoana ny iray amin'ireo olona ifandraisanaoNa izany aza, ny mpamosavy dia mety tsy hahafantatra tsara ny anaran'ny olona manokana.
Efa fantatrao fa misy anarana izay tsipelina fomba iray nefa tononina hafa, ka manahirana ny mamantatra an'i Siri. Soa ihany, misy tetika kely ao amin'ny iOS 8 hamahana ity olana manelingelina ity.
Mba hanaovana izany, ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ampidiro ny fampiharana Contacts ary tadiavo ilay olona izay tsy eken'ny Siri ny anarany. Rehefa manana ianao dia tsindrio ny bokotra fanovana, alefaso ny interface mandra-pahitanao ny safidy «manampy saha»Ary rehefa hitanao dia kitiho eo.
Mba hahafantaran'i Siri ny anaran'ny olona tokony hofidintsika ny saha «Anarana (fonetika)»Ka aorian'ny fikitihana azy dia hanana safidy hanoratra an-tariby amin'ny fomba amn-peo ny anaran'io olona io isika. Zava-dehibe ny ahalalana azy tsara raha tsy mbola tsy fantatrao ilay izy. Rehefa vita izahay, tahirizo ny fanovana dia vita ianao.
Raha tsy afaka manoratra ny anarana amin'ny ambaratonga fonetika isika, afaka mampiasa anaram-bosotra isika Mitranga amintsika izany ary na dia antsoina hoe John aza ilay olona ao amin'ny fandaharam-pianarana dia afaka manoratra amin'i Juan isika amin'ny endriny ary hiantso azy tsy misy olana izy. Tokony hotadidintsika fotsiny fa ho an'i Siri dia nomena anarana hoe Juan i John na araka ny namaritantsika azy.
Ny fanekena fonetika dia tsy azo ampiasaina amin'ny anarana fotsiny, fa azo ampiasaina ihany koa apetaho amin'ny anarana afovoany na ny anarany. Azo antoka fa amin'ireo safidy ireo dia tsy hanohitra intsony ny fiantsoana ilay olona tianao i Siri.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Siri » Ahoana ny fomba hampahafantarana an'i Siri anarana sarotra tononina
Jereo ity: https://www.actualidadiphone.com/2010/03/12/recopilacion-de-todos-los-rumores-pre-iphone/#comment-392090